Wafdi ka Socda Midowga Afrika oo Gaaray Magaalada Baardheere Ee Gobalka Gedo – STAR FM SOMALIA
Wafdi ka socda Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika oo gaaray magaalada Baardheere gobolka Gedo, ayaa halkaasi kulamo kula qaatay maamulka degmada iyo qeybaha bulshada.
Saraakiishan ka socotay Midowga Afrika ee gaaray Baardheere ayaa u jeedka socdaalkooda la xiriirta u kuurgelidda xaaladaha amni iyo tan nololeed ee ka jirta degmada Baardheere oo ka mid ah meelihii dhawaan laga wareegay Ururka Al-Shabaab.
Saraakiishan ayaa kulamo la qaatay maamulka degmada iyo qeybaha bulshada, kuwaasi oo ay ka dhageysteen xaaladaha guud ee ka jirta degmadaasi, gaar ahaan tan beni’aadanimo.
Guddoomiyaha Degmada Baardheere Cadow Nuur Xasan oo la hadlay StarFM ayaa tilmaamay in wafdiga ka socda Midowga Afrika ay soo kormeereen qeybaha ay ka koobantahay magaalada, isla markaana ay ka wada hadleen sidii ay uga qeyb qaatan lahaayeen gurmad u fidinta shacabka degmadaasi ku nool.
Guddoomiyaha degmada oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku adkeeyay in wafdigan ay kala hadleen xoojinta la dagaallanka Ururka Al-Shabaab.
Dhawaan ayaa la filayaa in wafdiga ka socda Maamulka KMG ah ee Jubaland ay gaaraan magaalada Baardheere ee gobolka Gedo, halkaasi oo ay kula kulmi doonaan saraakiisha booqashada ku jooga magaaladaasi.